Havaozina tanteraka ny Firefox ary mitondra ny bara URL mankany ambany | Androidsis
Androany isika dia afaka milaza izany Mozilla dia namoaka iray amin'ireo fanavaozana lehibe indrindra noraisin'ny Firefox tsy averina intsony. Fampivoarana vaovao izay mitondra ny bara URL hatramin'ny farany ambany ho fiovana lehibe indrindra.
Una fanavaozana tonga any Eropa aloha ary afaka roa andro dia hipetraka amin'ny kaontinanta amerikana izy io. Misy ihany koa ny tsy fisian'ny zava-baovao, na dia tsy azonay atao aza ny manavao ny pejy amin'ny fihetsika. Andao ataontsika amin'ny vaovaony rehetra.
1 Ny bara URL etsy ambany mba hahamora
2 Fiarovana Tracker vaovao an'ny Firefox
3 Zava-baovao lehibe iray hafa: ny Collections
Ny bara URL etsy ambany mba hahamora
Mozilla dia nilaza fa ny toerana fisotroana vaovao miaraka amin'ny url Izy io dia noho ny fisian'ny telefaona maro kokoa izay "lava", midika izany fa mifehy ny finday amin'ny tanana iray isika ary milamina kokoa ny fananana ireo singa manan-danja indrindra amin'ny interface amin'ny farany ambaniny; Aleo tadidintsika ny fampiharana One Hand Operation + izay mitondra an'ity mety hitranga amin'ny telefaona Samsung na dia efa namboarina ho azy ireo aza ny UI UI 2.5.
Na izany aza, manana safidy isika hamindra azy amin'ny tranokala teo aloha raha hitantsika fa tsy izany manao an'ity traikefa vaovao ity izahay Firefox ho an'ny Android. Na dia efa zatra aza ny zava-drehetra ary ny marina dia tsy ratsy mihintsy ny fikirakirana azy amin'ny ankihiben-tanantsika ankavanana.
Fiarovana Tracker vaovao an'ny Firefox
Iray amin'ireo zava-baovao farany manan-danja amin'ny Firefox ho an'ny Android, ary avy amin'ny kinova birao izay, ananan'i Mozilla nantsoina hoe Enhanced Tracking Protection, na araka ny tokony holazaina hoe Enhanced Tracking Protection. Io asa io dia mitovy tanjona mitovy ary hametra ny isan'ny mpanara-maso izay afaka mampiasa ny angon-drakitrao rehefa mizaha tranonkala hafa.
Afaka misafidy amin'ny ambaratonga telo amin'ny fiarovana isika: manara-penitra, hentitra ary manokana. Ny kinova default dia tsy hanakana ny atin'ny mpanara-dia, noho izany ho hitanao amin'ny fomba manokana ny dokam-barotra arakaraka ny toerana ary maro hafa. Mazava ho azy, raha mandeha amin'ny maodely henjana isika dia hitovy amin'ilay maneho an'io asa vaovao io izay avy amin'ny solosaina PC ary azo antoka fa maro no handray azy ireo amin'ny fifaliana amin'ny traikefa fitetezana manokana.
Amin'izay mba manoloana ny zava-drehetra mifandraika amin'ny fiainana manokana sy filaminana, Firefox for Android dia mandray endri-javatra kintana avy amin'ny Firefox Focus, natokana hijerena tsy mitonona anarana tanteraka ny fampiharana anao. Tsy iza izany fa ny fisokafan'ny rohy rehetra izay tsindrio ao anaty vakizoro vaovao. Mety ho toa adaladala izany nefa tsia.
Zava-baovao lehibe iray hafa: ny Collections
Ny Collections ny tenanao dia azo lazaina ho tsoratadidy voatokana amina anarana iray. Ary na dia mety misy ifandraisany aza izany, ny hevitr'i Mozilla hampihatra azy ireo dia avy amin'ny ilany iray hafa. Araka ny voalazan'i Vesta Zare, mpitantana ny tetikasa Firefox for Android, ny Ny fanangonana dia manana ny antony maha-izy azy ireo amin'ny "maodely ara-tsaina" izay natsangan'ny mpampiasa manodidina ny takelaka sy tsoratadidy.
Azontsika atao ny manazava izany amin'ny teniny manokana. ny ny ankamaroantsika dia mampiasa tsoratadidy hamonjy tranokala iray manan-danja amintsika na inona na inona antony ary tiantsika ny hamonjy azy io hiverina aminy hatrany. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny bankintsika, ilay tranonkalan'ny gaming na forum iray amin'ny Android dia rohy izay notehirizinay ary nanomboka nanjary ampahany amin'ny fiainantsika isan'andro.
Fa ny mampihomehy dia miaraka amin'ny volomaso, rehefa ampiasaintsika izy ireo ho fampahatsiahivana fotoana fohy momba ny zavatra tadidintsika fa saingy mijanona vetivety ihany izany. Ny tiako holazaina dia miresaka momba ny fomba fahandro na ny fikasana hanao vakansy izahay. Ary eo no miditra ny antony maha-Firefox Firefox. Ny interface Firefox Home dia mamela ireo tranokala ireo tsy ho very toa ny zava-mitranga ao amin'ny takelaka, saingy tsy maharitra izy ireo toy ny mitranga amin'ny tsoratadidy.
hafa Ny zava-baovao ao amin'ny Firefox ho an'ny Android dia fanohanana tsara kokoa ho an'ireo add-on antoko fahatelo, fanohanan'ny PiP ny horonan-tsary ary ankehitriny ny browser dia "namboarina" eo ambonin'ny motera mpitety GeckoView an'i Mozilla. Midika ity farany fa mavesatra 10% haingana kokoa ny tranokala. Anjaranao izao ny manandrana ity fanavaozana Firefox lehibe ity.
Firefox: mpitety tranonkala haingana, tsy miankina ary azo antoka
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Havaozina tanteraka ao anaty interface tsara i Firefox mba hanomezana traikefa ho an'ny mpampiasa vaovao